Top 9 lifhaki amin'ny baking | LIFEFCICER - 2018
TOP 9 velona mandritra ny famokarana
3. Proteinina tsy misy fanariana
Rehefa tsy misy fanangonana siramamy
Ny fanala sy ny voanjo dia eo an-tampony hatrany
Ny dipoavatra tsy natao ho an'ny tanjona voafaritra
Manaova dessert tsara
Lahatsary TOP 9 lifhaki amin'ny famokarana
Angamba maro no hanaiky fa ny fihinanana mofo sy mofo dia manimba, satria misy fiantraikany ratsy eo amin'ny sary izany. Saingy raha tsy manararaotra ireo zava-manitra ireo ianao, ary manamboatra azy ireo any an-trano, na tsy misy simika sy ireo fitaovana isan-karazany mahatsiravina, dia azo atao tsara ny manala ny ankohonany. Ny fifidianantsika androany ho an'ireo tia manamboatra. Ampitahao ny fizotran'ny fofona ary ankafizo ny fofony matsiro sy manitra.
Ity vokatra ity dia ilaina ampiana amin'ny koba. Na izany aza, tsy voatery foana ny mihinana rongon-tsakafo. Mba hamela haingana kokoa ny dibera dia aforeto izany ary atsofoka amin'ny siny lehibe. Aorian'ny minitra 5 dia ho afaka hanampy ny solika ianao, satria ho lasa malefaka sy malefaka.
Ny fomba mahazatra indrindra handravonana dessert dia sôkôla sotro. Andramo ny mamaky ny mpitrandraka karaoty ary jereo ny karazana fanokanana azonao.
Matetika ny fitaterana dia mitaky ny fanasarahana ireo zavatra ireo. Ampiasao tavoahangy plastika ny fanaovana izany. Atongilano ny atody, ary alaivo ny zozoro amin'ny tendany.
Indraindray dia adinontsika ny mividy zavatra toy izany ho toy ny siramamy tsy fahita firy. Ny kitapo plastika dia ho tonga amin'ny fanavotana, ny iray amin'ireo dia tokony hofongorana. Ary raha manao lavaka miaraka amin'ny denticules ianao, dia hikorontana ny crème extruded.
Manana endrika iray ihany ve ianao? Manaova akanjo volom-bolo, ary hahazo ny habetsahanao ilainao.
Matetika izy ireo dia milentika any amin'ny faritry ny koba. Soraty amin'ny mofomamy izy ireo - izany no hizara azy ireny.
Ny manandrana, raha efa vonona ny kitapo dia tsaratsara kokoa amin'ny saka na ny lalao. Raha tsy mijanona eo amin'ilay lalao ny koba, dia azo alaina avy ao amin'ny oven ilay izy.
Tsara ny manapaka ny tsindrin-tsakafo miaraka amin'ny fanampiana amin'ny tsiranoka. Ny mason'ilay mofomamy dia tsy misaraka, satria ny loko mora manapaka ny tsy fitoviana.
Raha mila manapaka ny tsiranoka mafana ianao, dia mangalà ny antsy ao amin'ny frizidera.
4 (79.09%) 22 vato
Aogositra 21 2018
Previous article Lahatsoratra manaraka
Ahoana no hividianana ny entana rehetra ho an'ny mpanadio, tsy hiala ao an-trano?
Azonao atao ve ny manome ny entana an-jazakely ao an-trano
Fitsipika fototra hamokarana jam
Ahoana ny handraisana na hividy pizza Margherita?
Tsy alefa ny mailakao. Ilaina ny saha nangatahana *
Ny renirano lava indrindra eran'izao tontolo izao - Top 10 (5.0 / 5)
Top-5 lifjhak "andro fiasana" misy reny lehibe (5.0 / 5)
Ny melodramas 2017 tsara indrindra amin'ny taona (5.0 / 5)
Mialà amin'ny fanorenana sy ny fako! (5.0 / 5)
Ny melodramas 2018 tsara indrindra amin'ny taona - Top 10 (5.0 / 5)
DDD peo Ny tafika matanjaka indrindra amin'izao tontolo izao 2018 taona
Pohudet.Guru peo Ahoana ny famelezana cellulite ao an-trano
Stroitelstvo.Guru peo Fanamboarana fitaovana ho an'ny lakozia. Ceramika - tsy misy fifaninanana!
Airlines peo Maniry anao ny fialan-tsasatra mahafinaritra
Denis peo Ny mpivarotra dia mividy fiara iray ampiasaina. Ahoana no iarovanao ny tenanao?
Toromarika momba ny fitsaboana geocupola
Trano an-tserasera amin'ny kiraro vehivavy - kiraro marika Eoropeana
Ahoana ny fisafidianana ny fiara kely sy ny zavatra hikaroka
Ahoana no fomba hananganana efitrano fandraisam-bahiny sy kanto?
Nahoana no mendrika kokoa ny mividy trano vaovao avy amin'ny mpandrindra?
Mpanohana ny tetikasa
© 2017-2018 Ny fampiasana fitaovan'ny tranonkala dia tsy omena afa-tsy amin'ny fanondroana ny rohy active LAYFSPIKER.
Tranonkala fampahalalana LAYFSPIKER
192236 St. Petersburg Sofiyskaya Street, 8B, trano. 1
telefaona: tel / fax: + 7 (812) 627-6922
fotoana fiasana Alatsinainy Aprily nosamborina Avy amin'ny 9: 00 ho 21: 00